Maxaa Ka Jira In Ciidamada Puntland ay dib ula wareegeen deegaano dhawaan laga qabsaday? -
HomeWararkaMaxaa Ka Jira In Ciidamada Puntland ay dib ula wareegeen deegaano dhawaan laga qabsaday?
Maxaa Ka Jira In Ciidamada Puntland ay dib ula wareegeen deegaano dhawaan laga qabsaday?
Wararka laga helayo Gobolka Bari ayaa sheegaya in saakay Ciidamada Dowlad goboleedka Puntland ay laba todobaad kadib ay dib ula wareegeen deegaanka Af-Urur oo ay dhawaan la wareegeen Ururka Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in ay bilaabi doonaan howlgallo ay ka sameynayaan Buuraha Galgala iyo deegaanada kale ee Gobolka Bari,halkaas oo ay ku sugan yihiin Xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish.
Si kastaba Ha ahaatee Al-Shabaab weli wax war ah kama soo saarin ka bixitaanka deegaanka Af-Urur ee Gobolka Bari, kadib laba todobaad oo ay maamulayeen, hayeeshee wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Puntland ay wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan.